Oliiqaa Dingil eenyu?
Siidaa Oliqaa Dingil: Oromiyaa Lixaa marfata magaalaa Dambi Doollootti ijaaramuuf karoorfame.
Oliiqaa Dingil eenyu jedhanii gaafachuun wana gaarii dha. Oliiqaan Oromoo irraa dhalata; Oromoo , Oromiyaa Lixaa, naannawa Qeellem keessa jiraatu; kan hiddi dhalootaa hidda ja’an Sayyoo warra Laaloo ti. Qo’annoo seenaa hangaa har’aatiin maqaa hadhaasaa beekuun danda’amu baatus maqaansaa guutuun “Oliiqaa Dingil Bookaa” jedhama.
Oliiqaa Dingil mana barumsaa qeesotaa /lubootaa/ galee akka barate seenaansaa nimirkaneessa. Erga guddatee umriinsaa hojiif ga’ee booda bara bulchiinsa Hayilasillaasee mootummaadhaan mindeeffamee hojjetaa tureera. Ga’een hojii goota kanaas gabaarra naanna’ee ashuura mootummaa walitti qabu ture. Gabaa hedduu inni irra naanna’aa ture keessaa gabaan Ashii, Muggii, Shabal, Qaaqee faan ni eeramu. Bakki jireenyaasaa Magaalaa Dambii Dolloo, Ganda 03 keessa akka ture odeeffannoowwan ni ibsu.
Caamsaa 23, bara 1929 wayita koloneeffattoonni Xaaliyaanii biyya keenya seentee humnaan weeraranii qabatanitti waggaa tokko booda dhiibbaa koloneeffattoonni kunniin ummatarraan gahaniin mormee bosona seenusaa seenaan ragaa baha.
Gocha Xaaliyaanonniifi sirni gita bittaa Nafxanyootaa ummata biyyattii keessa jiraatan irratti keessumaa Oromoorratti raawwachaa turanirraa kan ka’e haalli jireenyaa, aadaafi safuun ummatootaa baduu jalqabe. Wayita sana Xaaliyaanonni lammiilee biyyaa tokko tokko ofitti madaqsuudhaan maqaa “Baandaa” jedhamu ittimoggaasuun duuka buutuusaanii taasifachaa turaniiru.
Kana booda Oliiqaan nama durumaa qabee isa bira jiraatu, kan maqaansaa Shaanqoo jedhamu, qawwee namoonni dirqiidhaan Xaaliyaaniif galchuuf deeman irraa booji’ee Shaanqoo hidhachiisa. Kanaanis Xaaliyaaniifi baandaarratti tarkaanfii fudhachuu eegalan.
Sababoota Oliiqaa ‘shiftummaaf’ kakaasan keessaa tokko tokko eeruuf.
Facaasaa heexoo dhuguu
Oddoo Butaarra buluu
Sana booda Xaaliyaanonni reeffasaa suura kaasanii karaa laga Borxaa buusanii naannawa dur Biheeraawwii Xoor jedhamutti awwaalan. Wadaajoon, “Oliiqaa natu ajjeese” jedhee muudamuu hawwe sun Jimmaa geeffamee otuu achi jiruu guyyaa tokko mana daadhii taa’ee otuu dhaadatuu durbiin Oliiqaa achumatti ajjeese.
Seenaa gabaabaa goota baddaa Sayyoo kana, dabalatee kan gootota biro, bal’iaan barreeffamee hinteenye. Kunimmoo osoo dhaloonni seenaa beeku du’ee hindarbiin dhimma itti yaadamuu qabuudha. Dhaamsi kun immoo adda durummaan kan ilaallatu, hayyoota Oromoo barreessuu fi maxxansuuf humnaa fi dandeettii itti qabanii dha. Sababa kanaan, dhaamsi guddaan hayyoonni Oromoofi qaamni dhimmichi kallattiidhaan ilaallatu, dhimmoota akkanaarratti xiyeeffatanii hojjechuun hojii isaanii kan fardiitti isaan eeggatuudha.